Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii midnimo oo ka qabsoomay magaalada Winnipeg ee Dalka Canada.
Shirkii midnimo oo ka qabsoomay magaalada Winnipeg ee Dalka Canada.
Posted by Wariye Qaran	/ September 3, 2018
Waxaa maanta shir si heer sare ah loosoo agaasimay uu ka qabsoomay magaalada winnipeg oo ay isugu yimaadeen dhamaan umada soomaaliyeed ee halkaa ku dhaqan wax garadkoodii iyo odayaashoodii.
Hadaba shirkan waxaa ka soo qayb galay wafti balaadhan oo uu hogaaminaayo C/raxmaan sheekh oo uu weheliyo mudane Axmed Cali Qabxun, shirkan waxaa xidhiidhinayey Noor waxaana lagu furay wacdi diinta ah, waxaa kaloo lagu soo dhaweeyey Maxamed oo ka mid ahaa qaban qaabiyaashii wuxuu halkaas ka jeediyey khudbad aad u qiimo badan oo soo jiidatay dhamaan ka soo qaybgalayaashii shirka wuxuu aad uga hadlay midnimadu in ay muhiim tahay lama huraana ay tahay in la midoobo.
Waxaa madaxdan shirka lagu soo dhaweeyey hogaaminaayey Halgame Cabdiraxman Sheekh waftiga Jwxo ee shirka ka soo qayb galay wuxuu halkaa ku soo bandhigay warbixin guud oo ku saabsan guud ahaan dhulka ogaadeeniya ee ay Ethiopia gumaysato iyo isbedelka siyaasadeed ee sida xawliga ah uga socda Ethoipia iyo guud ahaan dhulka ogaadeeniya iyo sidii loola jaan qaadi lahaa iyadoo marna aan laga tanaasulayn aaya ka tashiga dadka soomaaliyeed ee ku hoos nool gumaysiga.
wuxuu aad ugu dheeraaday waqtigan la joogo waxa loo baahan yahay midnimo wax wada qabsi iyo in la garab istaago rabitaanka shacabka ee ay JWXO ku baaqday.
Waxaa lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha jaaliyada magaalada winnipeg muadane farxaan boojaale oo halkaa uga mahad celiyey dhamaan umadii soomaaliyeed ee ka soo qayb gashay shirka iyo qabanqaabiyaashii soo diyaariyey madashii quruxda badnayd ee shirku ku qabsoomay.
Odayaashii ka soo qayb galay waxay soo dhaweeyeen dhamaan wixii halkaa looga wada hadlay waxayna balan qaadeen in ay ay hill iyo hooba la garab taagan yihiin go’aamada ka soo baxay JWXO ee midaynta umada ku aadan ayna diyaar u yihiin in ay shirar waaweyn qabtaaan.
Ugu danbayntii waxaa halkaa masuuliyiintii shirka lagu weydiiyey su’aalo muhiim ah waxayna uga jawaabeen si taxadar leh wayna ku wada qanceen ka soo qayb galaashii shirku wuxuuna ku dhamaaday guul iyo is af garad.